Candy Crush Level 3914 kubiridzira uye matipi - Pipi Crush Game - Free Lives Tips Cheats Hints
You are here: Home / Uncategorized / Candy Crush Level 3914 kubiridzira uye matipi
Last updated on Chikunguru 6, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
In the 90’s we used to hear have a break, have a KitKat! This phrase should now be changed to have a break to play candy crush. Mutambo uyu wava nemukurumbira zvakanyanya pakati pemapoka emazera ese zvekuti haugone kuchengetedza chero munhu kure nawo. Kuda kuitamba kuri kuwedzera zuva nezuva. Kana ukangotarisa mufoni yemunhu chero upi zvake uchawana iyi application. Mumwe munhu angave ari padanho rekutanga; vamwe vangave vari pro pazviri asi iwe unoziva kuti chii chingave chakajairika chimiro? Munhu wese anenge akamira pane imwe level. Vaizotsvaga mazano angavabatsira kukunda danho iri. Saka tiri kukuunzirai Candy Crush nhanho 3914 kubiridzira uye matipi nokuda kwebetsero yenyu.
Pfungwa iri padanho iri kuunza pasi zvese zvinoshandiswa zviripo mune ino nhanho uye kusvika padanho repamusoro 20,000 anonongedza kupedzisa danho iri. Zveizvi, vakakupa 25 mafambiro asiri mazhinji saka chenjera paunenge uchigadzira? Pakazara iwe unofanirwa kubata nazvo 2 zvigadzirwa. Kana iwe ukaita zvibodzwa 20,000 zvinongedzo uye nekuunza pasi ese mavhezheni eaya maviri zvigadzirwa, ipapo chete ndiwe unozokwanisa kupedzisa danho iri uye kupedza kushushikana kwako. Kukunda kushushikana kwako, isu tinokupa iwe kubiridzira uye matipi eanopwanyika kupwanya 3914.
Matipi uye manomano
Remember the difficulty level is hard so you have to be on your toes while playing this. The best idea from the candy crush level 3914 kubiridzira uye matipi would be to begin from the bottom of the board as it will help you to get more special candy. You can use your striped candies to get rid of the ingredients on the board.
Once you have done that you need to make special candies. Sanganisa iwo ese akakosha masiwiti awakagadzira uye edza kutyora licorice yese, swirls, chocolates uye waffles.
Pfungwa yekutyora zvese izvi kuunza pasi zvese zvinongedzo kubva kuruboshwe kuenda pasi kurudyi. Saizvozvowo, iwe unoda zvimwe zvinongedzo kuti zvifambewo kubva kumusoro kuruboshwe uye pakati kuenda kudivi rekurudyi. Nokuita izvi iwe uchakwanisa kuvabvisa kubva pabhodhi.
Kana iwe uchigona kuwana izvi zvinongedzo kure nebhodhi mukati mezvakataurwa zvinofamba i.e. 25 unotii, ipapo iwe chete unogona kupedzisa nhanho. Kana ukasafamba nhanho nhanho iwe ucharamba wakanamatira padanho iri kwenguva yakareba. Hunza zvese zviri kuruoko rwavo rwerudyi kuti uzvibvise kuburikidza nema candies akakosha. Zvakanga zvisiri nyore here izvi? Ingoshandisa matipi atakapa mune ino chinyorwa uye ona mashiripiti. Iwe unozogona kugadzirisa yako nhanho mukati mekuenda kumwe chete. Uku ndiko kunaka kwemanomano edu.